မက်ဆေ့ခ်ျကို "502 »အမှားပါလျှင်ငါသည်အဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်း
သင့် Monitor ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအမျိုးမျိုးသော node များကိုရည်ညွှန်းတဲ့အခါမှာထိုအချိန်ကသင်ကအင်တာနက်ပေါ်ရှိအခြားမည်သည့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့စာမကျြနှာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ, သင်မက်ဆေ့ခ်ျကို "အမှား 502 »ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျမ ...
အသစ်တစ်ခုကိုအဆင့်အဖြစ် site ၏ optimization နှင့် ဆက်စပ်. တက်ဘလက်, ဖုန်း, - ယနေ့လူအများစုမိုဘိုင်းကနေတဆင့်အွန်လိုင်းသွားပါ။ အသုံးပြုသူတစ်ဦးလာဆိုက်မြင်ပါလျှင် ...
အင်တာနက်ပေါ်ရှိ passive ဝင်ငွေ - ကတစ်ချိန်ကကွန်ယက်အတွက်ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းများအတွက်ကြည့်ရှုသူအများအပြားအတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောဝင်ငွေရရှိရန်တလမ်းတည်းဖြင့်သတ္တုတွင်းနှုန်းထားများဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမပြုလုပ်မယ့် ...
အဆိုပါအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်း: "Touch ကိုခုနှစ်တွင်" ၏တံခါးပိတ်အုပ်စုတစ်စုအောင်ဘယ်လို?
ယနေ့အထိ, လူတွေ, အထူးသဖြင့်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များ, အများကြီးကို virtual အစစ်အမှန်ဆက်သွယ်ရေးကြိုက်တတ်တဲ့။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်လူဦးရေရဲ့ကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလူမှုကွန်ရက်စွမ်းရည်အတော်ပင်။ ဤအမှု၌လူကြိုက်အများဆုံး "VKontakte" ဖြစ်ပါတယ်။ ...
Outlook နဲ့များတွင် "Yandex" မေးလ်ချိန်ညှိခြင်း: ဖျေါပွခကျြ
Outlook နဲ့« Yandex "မေးလ် Configuring ကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်ဆံ့, သင်သည်မှန်ကန်သော parameters တွေကိုချမှတ်ရန်မည်သို့မသိရပါဘူးလျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့ဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှုဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်မထားဘူး။ သငျသညျဆိုပါက ...
ဘယ်လို "အတန်းဖော်" တွင်စာမကျြနှာကိုသော့ဖွင်ဖို့လွယ်ကူပြီးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်
social networking site များကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်အတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လူကြိုက်များဖြစ်လာကြပါပြီ။ သက်သက်သာဖျော်ဖြေရေး features တွေဆက်သွယ်ရေးဖြစ်နိုင်ခြေတွေအများကြီးသယ်ဆောင်ရန်အပြင်လူမှုကွန်ယက်များ, ။ ဒါကြောင့်ဘယ်သူကိုနှင့်အတူသင်လူတစ်ဦးကိုကြည့်ဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူး ...
သည် "Taobao" မှအမိန့်ကိုဘယ်လို - အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်။ တရုတ်ဆိုင် "Taobao": ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် Delivery
တရုတ်ဘာသာစကားကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်မှာအခက်ခဲဆုံးအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုပေမယ့်စကားလုံးက "Taobao က" အရာခပ်သိမ်း, ပုံရသည်, လူသိများသည်။ ဤသည်အများအပြားအွန်လိုင်းစတိုးအပေါ်အခြေခံသည်တစ်ကို virtual ကုမ္ပဏီကြီးစျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့လူတွေကိုအမိန့်ကိုဘယ်လိုပြောပြနိုင် ...
ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းမဆိုကွန်ယက်ကိုအသုံးပြုသူအထဲကတွေ့, အင်တာနက်ပေါ်တွင်ယာဉ်အသွားအလာကဘာလဲ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကျနော်တို့ကြိုးစားကြနှင့်ဤအယူအဆနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုပါ။ အင်တာနက်လမ်းကြောင်း - အထွက်နှစ်ဦးစလုံး, သတင်းအချက်အလက်ပမာဏဖြစ်ပါတယ် ...
e-commerce ကိုတစ်ဦးလျှင်မြန်အရှိန်အဟုန်မှာဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ်, များပြားခေတ်သစ်ရုရှားအွန်လိုင်းစီးပွားရေးသမားပြည်တွင်းဈေးကွက်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်မသာ, ဒါပေမယ့်လည်းနိုင်ငံခြား clients များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ကြိုးစားပါ။ ၏သင်တန်း, ဒီအမေရိကန်ငွေပေးချေသုံးစွဲဖို့မသာနိုင်စွမ်းလိုအပ်ပါတယ် ...
"Meile" အတှကျမှတျပုံတငျဖို့ကိုဘယ်လို: အရင်ကဆိုရင်အဘို့ညွှန်ကြားချက်
ဒီနေ့ "Mayle" ကိုဖန်တီးရန်မည်သို့မည်ပုံလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဤအမှု၌ခက်ခဲဘာမျှအဆင့်မြင့်အသုံးပြုသူများအဘို့ဖြစ်၏ရှိသေး၏။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုမည်သူမဆိုမှတ်ပုံတင်၏နိယာမကိုရှင်းပြနိုင်ပြီး, ကူညီဖို့ ...
သည် "ကီဝီ" -koshelek ဖယ်ရှားပစ်ရန် 100% တစ်လမ်း
ဝဘ်အတွက် QIWI ငွေပေးချေမှုစနစ်အားအကြောင်းသင်တို့ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသန်းပေါင်းများစွာရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ထိုမျှမကအားလုံးအပြုသဘော, ထိုရိုးရှင်းသောမှတ်ပုံတင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏ကြားမှ။ အသုံးပြုသူများသည်တို့တွင်အကျော်ကြားဆုံးဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုနှင့်အကျပ်အတည်း -a"ကိုဘယ်လိုမှ ...
ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တို့တွင်ခေါင်းဆောင်အတောမသတ်သာလွန်၏ညာဘက်များအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ "Google" ကိုတိုက်ခိုက်နေသည့်ပြည်တွင်းစီမံကိန်း "Yandex" ဟုခေါ်တွင်စေနိုင်ပါတယ်။ ရဲ့အမှုအရာသည်ဤဒေသအတွင်းရှိနေကြသည်ကိုဘယ်လိုကြည့်ပါစို့ ...
ဟူသောဝေါဟာရကိုစာသားအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကနေဘာသာပြန်ပါက "တစ် screamer" ကိုဆိုလိုတယ်။ ရဲ့ရှင်းပြချက်ကိုရိုးရှင်းဖို့ကြိုးစားကြပါစို့။ Screamer - ကဘာလဲ? အခြေခံအားဖြင့်ဤအလားတူဇာတ်လမ်းဖှံ့ဖွိုးတိုးနှင့်အတူရုပ်ရှင်ဖြစ်ကြသည်။ အစပိုင်းမှာ, အ ...
အများအပြားစိတ်ဝင်စားသည်အင်တာနက်မှတစ်ဆင့်ငွေအများကြီးလက်ခံရရှိရန်အခွင့်အလမ်း, ဒီအစဉ်အလာအလုပ်အကိုင်နှင့်အတူအချို့သောပြဿနာများရှိသည်သောသူတို့အဘို့အထူးသဖြင့်မှန်သည်။ အဆိုပါအကြောင်းပြချက်သိသာထင်ရှားသောသို့မဟုတ်အလှမ်းဝေးဖြစ်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်သူကဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ ...
Riley - ကဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာ? ပြန်လာနားလည်ပြီးသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
မကြာသေးမီကအင်တာနက်အတိုကောက်ကိုသူ၏လမ်းပင်လူများ၏တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အချို့သောတင်ပါတယ် (အဓိကအားဖြင့်လူငယ်များ) တွင်တစ်ဦး "ကျေးဇူးတင်ပါတယ်" ဒါပေမယ့်ရိုးရှင်းစွာအသံထွက်ကိုပင် "သင်ကျေးဇူးတင်" သို့မဟုတ်ပြောမဟုတ်ကြိုက်တတ်တဲ့စခွေငျးငှါ ...
ယနေ့တွင်သင်တို့သည်အိမ်မှာပေးပို့များအတွက်လက်မှတ်အမိန့်သို့မဟုတ်ကြိုတင်ယူထားနိုင်သည့်မှတဆင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်အားရှိပါတယ်။ ဤအရာတစျခုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုဘယ်လိုချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ပြည့်သောဆိုက် ticket.ru ဖြစ်ပါတယ် ...
Google နှင့် "Yandex" မှတဆင့်ဒီ site မှာရှာပါ။ ဆိုက်ကိုရှာရန် script ကို
ပိုသင့် site အသစ်သောသတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူ updated, ရှိရာသို့အလျင်အမြန်ကိုစနစ်တကျအသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေရှာဖွေရေးမိတ်ဆက်ပေးမယ့်လိုအပ်ရှိသေး၏။ ထိုသို့ပြုမှဘယ်လိုအများအပြားရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးနည်းလမ်းကိုသင့်ရဲ့ built-in CMS သို့သုံးစွဲဖို့အဆိုတင်သွင်း။ ဒုတိယအချက် ...
ကျနော်တို့အွန်လိုင်းအီလက်ထရောနစ်ဝယ်ဖို့ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပိုပိုပြီးလူတွေဝဘ်ပေါ်တွင်သင်သိသိသာသာလျှော့စျေးအနည်းဆုံးတူညီထုတ်ကုန်ကိုဝယ်နိုင်သည်ကို သိ. , အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ဖို့ switching နေကြသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အဲဒီမှာ ...
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,437 စက္ကန့်ကျော် Generate ။